Muta otu ahia ubochi ga - esi mee ka i baa uru! Mụta ahia 2 February 2021
Mụọ 2 Trade 2021 Guide On Day Trading!
Tradingzụ ahịa ụbọchị bụ usoro ịzụ na ire akụ - dịka ego, ebuka, ma ọ bụ ngwa ahịa - n’echiche ị nweta uru site na ahịa ahịa na-agbanwe agbanwe. N'aka ozo, i nwere olile anya ire ihe kariri nke ikwuru ugwo.
N'ikwu nke a, echiche dị oke mkpa nke ịzụ ahịa ụbọchị bụ na ị gaghị ejide ihe ọ bụla karịa otu ụbọchị. N'ụzọ megidere nke ahụ, ndị ahịa nwere ike imepe oghere maka ọtụtụ awa, ma ọ bụ ọbụna nkeji. Ka o siri dị, uru a dabere na mmụba dị ntakịrị ntakịrị na-abawanye / mbelata - ọtụtụ mgbe site na enyemaka nke leverage.
Gbagwojuru anya? Emela - dị ka anyị Mụta 2 Trade 2021 Guide On Day Trading, anyị na-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma. Site n'ịgụ ya n'ụzọ zuru ezu, ị ga-eguzo ohere kachasị mma iji nweta ọrụ azụmaahịa gị n'ụkwụ aka nri!
Mara: Ọtụtụ ndị na - azụ ahịa ụbọchị ọhụụ na - efuna ego. Nke a bụ n'ihi na ha enweghị nghọta doro anya etu ụbọchị azụmaahịa si arụ ọrụ - ọkachasị ma a bịa n'ịwụnye usoro atụmatụ ijikwa ihe egwu.
Isiokwu Ndị Content
eToro - Zụta ma tinye ego na isslọ Ọrụ-Akwụghị ego
Zụta ihe karịrị 2,400, 16 cryptocurrencies, na 250 ETF na-enweghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọ bụla
Zụọ ọtụtụ puku CFDs
Nkwụnye ego na kaadị debit / kaadị, akpa ego, ma ọ bụ akaụntụ akụ na PayPal
Zuru oke maka ndị ahịa ọhụụ ma na-achịkwa nke ọma
Gịnị bụ Day Trading?
Na ụdị ya kachasị dị mkpa, azụmaahịa ụbọchị bụ ụdị ahia n'ịntanetị nke ahụ adịkarịghị ahụ onye na-etinye ego na-emeghe otu abalị. Kama nke ahụ, azụmahịa na-arụkarị ọrụ maka ọtụtụ minit ma ọ bụ awa - mana ọ dịghị ụbọchị. Nke a dị nnọọ iche na mmiri iyi ọdịnala ọdịnala dịka ebuka na agbụ - nke na-ahụ ndị na-etinye ego na-ejide akụ ahụ ruo ọtụtụ afọ.
N'ihi ya, ọdịdị dị mkpirikpi nke ịzụ ahịa ụbọchị pụtara na ndị na-achụ ego ga-eleba anya obere uru. Site na nke ahụ, ndị ahịa ụbọchị na-etinye ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ narị ndị ahịa ọ bụla na kwa ụbọchị - yabụ obere uru ndị a nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa maka ndị nwere ọ skụ. N’ụzọ dị oke mkpa, ndị ahịa ụbọchị niile - n’agbanyeghi nka ma ọ bụ ahụmịhe, ga-ezute ịda mba ahịa. Nke a bụ naanị ụdị egwuregwu ahụ.
Otú ọ dị, ndị meworo ogologo ndụ na-aga nke ọma na-azụ ahịa ụbọchị na-amaghị otú ha ga-esi nagide mmetụta mmetụta uche nke ịhapụ ego. N’aka ozo, nke a bu ebe ndi ahia ohuru na adabaghi. Ka o sina dị, iji nwee ike ịzụ ahịa taa, ị ga-achọ iji onye na-ere ahịa n'ịntanetị. N'ime ime nke a, ị ga-enweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego. Chee echiche banyere mmanụ, ọla edo, ebuka, ndeksi, ETFs, yana mkpuchi.
Ozugbo i lekwasịrị anya na ihe onwunwe, ị kwesịrị ịkọ nkọ ma ị chere na ọ ga-arị elu ma ọ bụ ala na uru - n'ihe metụtara ọnụahịa ahịa ya ugbu a. Ọ bụrụ n’ịkọ nkọ n’uche, ị ga - akpata ego. Ọ bụrụ na i meghị otú ahụ, ego ga-efunahụ gị. N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ahịa nke ndị na-etinye ego na-eme n'ahịa ụbọchị, ị ga nwee nghọta siri ike banyere otu esi agụ chaatị, yana ịkọwa akụkọ ndị bụ isi.
Uru na ọghọm nke ụbọchị ahia
Zụọ ọtụtụ puku ahịa
Ndị ahịa na-aga nke ọma na-emesapụ aka oge niile
Ikike ogologo oge ma ọ bụ mkpụmkpụ
Tinye ihe nkwado iji bulie ogo ahia gị
Ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa azụmaahịa ụbọchị ịhọrọ ka ịhọrọ
Bido site na iji debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ obere e-wallet
Ahịa na njem site na ngwa ngwa ahịa
Ọtụtụ ndị ahịa ụbọchị na-efunahụ ego
Ikwesiri inwe ike ijikwa mmetụta mmetụta uche nke ịhapụ ahịa
Ingghọta Day Trading - The Basics
Usoro ahia ụbọchị dịtụ mfe ozugbo ị gbanwere isi gị. Iji nye aka kpochapụ alụlụ ahụ, anyị edepụtara ụfọdụ n'ime ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịghọta tupu gị ejiri ego gị.
✔️ Zụta (Ogologo) na-ere (Short)
Y’oburu na mbu jiri ahia ahia ahia ahia, igha ama n’aka gi na inwere otu uzo, ya na otu nhọrọ n’azu izu ahia. Nke ahụ bụ ịsị, ị nwere ike ịkọ nkọ ọnụahịa ụlọ ọrụ na-akpata na-aga up. Yabụ, ị gaghị azụta mbak na IBM, Ford Motors, ma ọ bụ Microsoft ma ọ bụrụ na ịchọrọ na ụlọ ọrụ ahụ ga-aba uru!
Agbanyeghị, nke a bụ ebe azụmaahịa ụbọchị pụrụ iche, ebe ị nwere nhọrọ nke ịga 'mkpụmkpụ'. Nke a pụtara na ị na-atụgharị uche na akụ, ma ọ bụ otu akụ, na-ebelata ọnụahịa. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị chere na ọnụ ahịa mmanụ ga-agbada na awa ndị na-abịanụ.
Site na itinye iwu 'ere' na $ 1,500 - nkwụsị 5% na ọnụ ahịa ruru uru nke $ 75. N'ezie, ị nwere ike ịga 'ogologo' mgbe ahia ụbọchị. Nke a pụtara na ị na-atụgharị uche na uru nke akụ a na-arị elu. Iji mee nke a, ị ga-etinye usoro 'ịzụta'.
✔️ zụ nwa oge
Ọzọ, anyị kwesịrị ileba anya na oge azụmaahịa ụbọchị. Dịka anyị kwuru na mbido, mgbe anyị na-etinye ego na ebuka ma ọ bụ nkekọ, anyị na-ejidesi akụ ahụ ike ọtụtụ afọ. Nke a na - enyere anyị aka ịfefe ebili mmiri na - agbanwe agbanwe nke ahịa.
Agbanyeghị, n'ihe banyere ịzụ ahịa ụbọchị, ndị na-etinye ego na -echekarị oghere ọtụtụ awa karịa. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ ga-abụ ihe a na-adịghị ahụkebe maka onye na-azụ ahịa ụbọchị iji meghee ọnọdụ ya n'abalị.
Mpịakọta Dị Ukwuu, Ahịa Ahịa Na-erughị Ego
Na-eduga na ngalaba dị n'elu, ọ bụ ihe ezi uche dị na uru ga-abụ nkeji mgbe ijidesi ike n'ọnọdụ na-erughị otu ụbọchị. Nke a bụ ikpe kachasị mgbe ị na-azụ klas akụnụba dị ka ebuka, ndepụta, NY, ọla edo, ma ọ bụ gas nkịtị - dịka ọkwa volatility na-adịkarị ala.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye na-azụ ahịa zụtara ihe ịzụta ihe na ntinye S&P 500. Ego ole ka ị chere na ndeksi ahụ ga-agagharị n'otu ụbọchị? N'okpuru ọkọlọtọ ọnọdụ, siwing na ịnye ọnụahịa nwere ike na-ekpuchi a 0.5-2% nso.
N'ihi nke a, ụfọdụ ndị ahịa ga-etinye ọtụtụ azụmaahịa kwa ụbọchị. Ọbụghị naanị na ihe a na ebumnuche pere mpe pere mpe, kama ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ahịa ga-efunahụ ndị ọzọ. Ka anyị na-ekpuchie nke ọma, ndị ahịa ụbọchị ga-ejikwa ihe mmụba iji mee ka uru bawanye.
Day Trading: Olee akụ ndị m nwere ike ahia?
Abịa n’ihe akụnụba akọwapụtara dị ka ahịa ụbọchị, ọnụọgụ ego dị na ya ọtụtụ puku. Nke a na - achota na ndi ahia ahia ahia nwere otutu ihe di iche iche ha g’enwe n’oge obula.
N’okpuru ebe a, anyị edepụtala ụfọdụ ngwa ọrụ ndị a na-azụkarị n’ahịa.
Equities: Ngwaahịa ahia bụ otu n'ime uru kachasị maka ndị na-ere ahịa ụbọchị, ebe ọ bụ na volatility na-adịkarị elu karịa nke nke ederede sara mbara dị ka S&P 500. Ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-enyekarị gị ohere ịbanye na nnukwu ụlọ ahịa ngwaahịa dịka NYSE, NASDAQ, LSE, na TSE. Somefọdụ ga-ebikwa ahịa na-erughị mmiri dị ka ndị dị na Singapore, Hong Kong, Canada, na Australia.
Ụdị: Ndepụta nke ngwa ahịa ahịa na-enye gị ohere ịzụ ahịa ahịa sara mbara site na otu azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, site na ịzụ ahịa FTSE 100, ị nwere ike ịkọ nkọ banyere ọdịnihu nke ụlọ ọrụ 100 kachasị ukwuu UK depụtara n'ihu ọha. Ihe omuma atu ndi ozo gunyere Dow Jones na NASDAQ 100.
Ngwaahịa: Ọzọkwa, ahia na-ere ahịa bụ ihe a ma ama n'etiti ndị ahịa ụbọchị. Nke a gụnyere ọla dị ka ọla edo na ọla ọcha, ike dị ka mmanụ na gas, yana ngwaahịa ndị ọrụ ugbo dị ka ọka wit na ọka. Ahịa ngwaahịa na-arụ ọrụ 24/7, ma na-enye ikpo mmiri.
ETFs: Ego gbanwere (ETF) na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere akụ, ma ọ bụ otu akụ, na-enweghị ịnwe onye nwe. Dị ka uru nke ETF ga-arịgo na ala na nke abụọ site na ntọala nke abụọ, ha na-ewu ewu nke ukwuu na ndị ahịa ụbọchị.
Forex: A na-akọ na ụlọ ọrụ forex zuru ụwa ọnụ na-akwado ihe karịrị ijeri $ 5 ijeri ahịa ego ọ bụla kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe kpatara ụfọdụ ndị ahịa ga - eji bụrụ ọkachamara na Forex. Ahịa ndị ahụ na-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị, na ịkwụ ụgwọ anaghị abụ nsogbu.
Ego: Cryptocurrencies dị ka Bitcoin na Ethereum ugbu a na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe ijeri dollar. Ka o siri dị, ị nwere ike ịzụ ahịa ego dijitalụ ndị ama ama na dollar US. Rịba ama, cryptocurrencies na-agbanwe nke ukwuu, yabụ ha na-anọchi anya ụzọ itinye ego dị elu, nke nwere ụgwọ ọrụ dị elu.
N'otu aka, ọ bụ ihe ama na ndị ahịa ụbọchị ahụ nwere ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego site na otu saịtị na-ere ahịa. Otú ọ dị, ọ gafere ebe ndị ahịa ga-ekwe omume ọkachamara na niile akpan owo ọmụmụ. N’aka ozo, ndi ahia igba ahia gha adi niche rue otu ma obu abuo.
Nke a bụ echiche dị mkpa maka gị icheta dị ka onye na-azụ ahịa ọhụụ, ebe niching ala ga-enye gị ohere ịnweta nka na mpaghara itinye ego gị. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na otu ụbọchị ị kpebiri ire mmanụ, echi ya S&P 500, na mgbe ị gachara ị gafere na cryptocurrencies. N'ọtụtụ oge, nke a bụ atụmatụ na-eweta ọdachi, ebe ị ga-abụ ọnya nke azụmaahịa niile na ọ nweghị nke ọ bụla.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, chee echiche otú ọ ga-esi dị mma kama itinye uche na otu ngwa ọrụ ego - dịka GBP / USD na Forex ma ọ bụ mmanụ mmanụ na ume? Inwere ike itinye oge gị niile na-enyocha ihe niile ị họọrọ, wee mee mkpebi siri ike banyere ụzọ ahịa ga-esi aga.
Ezigbo Ihe Nlereanya ofwa nke Dayzụ ahịa Daybọchị
Yabụ ugbu a ị matara ntọala nke azụmaahịa ụbọchị, ugbu a anyị ga-elele atụ nke ụwa. Iji mee ka ihe dị mfe, anyị ga-eji ọnụọgụ ndị bụ isi ka ị ghọta isi ụkpụrụ nke otu azụmaahịa ụbọchị nwere ike isi rụọ ọrụ.
Na-eme Ogologo Oge
Dịka nyocha nyocha gị, ị chere na ọnụahịa nke ngwaahịa Facebook bụ n'ihi ịrị elu na elekere na-abịanụ
Ka o siri dị, ị na-etinye iwu 'zụrụ' na ahịa ahịa $ 129.00
Mkpokọta osisi gị bụ $ 500
Mgbe awa ole na ole gachara, ọnụahịa Facebook na-abawanye na $ 130.29
Nke a na - anọchite anya mmụba nke 1%
Na mkpokọta nke $ 500, ngụkọta uru gị bụ $ 5
Igbachi-na uru gị, ị na-emechi ahia site ịtụkwasị a 'ere' iji
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, otu onye ahịa ụbọchị ga-enwe afọ ojuju na uru dị mkpụmkpụ nke 1%, ọkachasị mgbe ị tụlere ọnọdụ ahụ mepere maka naanị awa ole na ole. Iji mee ka nke ahụ pụta ìhè, ọtụtụ isi ụlọ akụ US ka na-akwụ naanị ego 0.1% kwa afọ!
Ọzọkwa, na ka anyị na-ekpuchi n'oge na-adịghị anya - onye na-ere ahịa ụbọchị nwere ike kpebie itinye ihe nkwụnye ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha debere ahia dị n'elu na ntinye nke 10x, uru ụbọchị nke onye ahịa ga-abawanye site na $ 5 na $ 50.
Short Ga-agba mkpụmkpụ
Dị ka kwa gị oru nnyocha, ị na-eche na price nke Ford Motors ngwaahịa bụ n'ihi na ibelata na-abịa awa
Dị ka ndị dị otú a, ị na-etinye 'ahịa' n'ahịa n'ahịa nke $ 5.50
Mkpokọta osisi gị bụ $ 3,000
Mgbe awa ole na ole gachara, ọnụahịa Ford Motors na-agbada na $ 5.30
Nke a na-anọchite anya mbelata nke 3.63%
Na mkpokọta nke $ 3,000, ngụkọta uru gị bụ $ 108.90
Igbachi-na uru gị, ị na-emechi ahia site ịtụkwasị a 'Buy' iji
Ihe atụ a dị n’elu na-egosi anyị otu onye ahịa azụmaahịa ga-esi jiri ọrụ dị mkpụmkpụ rụọ ọrụ nke ọma. Ha na-emepe ahia ahụ site n'itinye iwu 'ree', ma mechie ya site na ịtụ ahịa 'zụrụ'.
Iwu Daybọchị ahia
N'ihe atụ ndị anyị nyere ugbu a, anyị akọwaala na ndị na-ere ahịa ụbọchị na-etinye azụmahịa abụọ n'otu n'otu. Ighaghachi - ọ bụrụ na ị gaa ogologo oge, ị ga-emeghe site na ịtụkwasị iwu ịzụta, wee mechie ahịa ịre ahịa. Ọ bụrụ na ị na-eme ka akụ gị dị mkpụmkpụ, ị na-eme ihe megidere ya.
Ọ bụ ezie na echiche a ka bụ eziokwu, ndị ahịa ụbọchị agaghị adịkarị, anyị na-echekwa adịkarịghị, hapụ iwu ka emeghe. Site na nke a, anyị na-ekwu na ha wụnye iwu ọpụpụ ka ahịa ha wee na-akpaghị aka. A sị ka e kwuwe, ndị ahịa ụbọchị agaghị enwe ikike ịnọdụ ala na ngwaọrụ ha ruo ọtụtụ awa na njedebe na-eche iji aka mechie iwu.
Nke a bụkarị ikpe mgbe ị tụlere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke iwu ndị ahịa ụbọchị ahụ na-etinye ụbọchị niile. N'ihi ya, ndị ahịa ụbọchị ga-etinye ma iwu 'nkwụsị-ọnwụ' na iwu 'iwere-uru' tupu ha emee ahịa ọhụrụ.
✔️ Iwu nkwụsị-nkwụsị
Iwu nkwụsị ga-abụ opekempe achọrọ mgbe azụmaahịa ụbọchị. Ha na - enye gị ohere imebi ọghọm gị site na imechi azụmaahịa mgbe ahịa ga - emegide gị site na otu ego.
Ka anyị kwuo na ị na-achọ ịga ogologo oge na Bitcoin / USD na $ 7,110
Think chere na ọnụahịa ga-abawanye, mana ịchọrọ ịchekwa akụ gị site na ịwụnye ezi uche nkwụsị-ọnwụ
Ihe kachasị ịchọrọ ida na ahia bụ 2%
N'aka ozo, oburu na onu ahia nke Bitcoin / USD dara site na 2% kari onu ahia ya nke $ 7,110 - ahia gi gha emechi
Nke a ruru nza nke $ 142, yabụ anyị debere nkwụnye ụgwọ nkwụsị anyị na $ 6,968
Ozugbo i mechara usoro nkwụsị nkwụsị a, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na Bitcoin / USD gbadara site na 3%, 30%, ma ọ bụ 99% - a ga-etinye mfu gị naanị 2%.
Rịba ama: Iwu ịkwụsị ọnwụ anaghị akwụ ụgwọ 100%. Site na nke a, anyị na-ekwu na n'ọnọdụ ọnọdụ ahịa na-agbanwe agbanwe, enwere ohere na ahịa azụmaahịa gị agaghị adaba na onye ahịa ọzọ. Iji gbochie ihe egwu a, ị ga-achọ ịtụle usoro nkwụsị-'akwụgoro'. N'ime ime nke a, onye na-ere ahịa ga-ekwenye na ahia gị ga-emechi ọnụ ahịa ego ịkwụsị. Otú ọ dị, nke a ga-efu gị obere ụgwọ.
Yabụ ugbu a ịmara ihe ịkwesịrị ịme iji belata ọghọm gị na akpaghị aka, ọ dị mkpa ka ị chee maka ebumnuche gị. Nke a dị oké mkpa n'ụwa nke ịzụ ahịa ụbọchị, ebe ọ bụ na ị ga-achọkarị ụzọ ọpụpụ n'uche.
Iji maa atụ, ebe ịchọrọ ịbelata ọghọm gị na 2%, ị nwere ike ịchọrọ oke uru nke 5%. Kedu ụzọ ọ bụla, usoro a na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dịka usoro nkwụsị-ọnwụ, mana ntụgharị.
Ga-etinye iwu ịzụta na Bitcoin / USD na $ 7,110
Tọbela iwu nkwụsị gị na $ 6,968 - nke bụ nnukwu ọnwụ nke 2%
Wantchọrọ ịchọta uru nke 5% site na ahia a
Iji mezuo nke a, anyị kwesịrị Bitcoin / USD iji mụbaa site na $ 355.
Dị ka ndị dị otú a, anyị na-etinye usoro iji nweta ego na $ 7,465
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, ndị ahịa ụbọchị ga-ekpuchi ihe ndị nwere ike ịpụta na akpaghị aka. Ọ bụrụ na ihe agazie, a ga-emechi ahịa ahụ na uru site na ị nweta uru. Ọ bụrụ na ihe anaghị eme atụmatụ, mgbe ahụ iwu nkwụsị ga-emechi azụmaahịa ahụ na mfu.
N'ụzọ dị oke mkpa, nke a bụ ka ndị ahịa ụbọchị si enwe ike itinye ọtụtụ iwu kwa ụbọchị. Site na nke ahụ, na ụfọdụ ụfọdụ, agaghị ewere ma ọ bụrụ na ịnwe uru ma ọ bụ ịkwụsị-ọnwụ ga-ebute ma ọ bụrụ na akụ ahụ dị n'ime usoro abụọ ahụ.
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, mgbe ahụ, onye ahịa ụbọchị ahụ ga-achọ ikpebi ma ọ ga-emechi ahia ahụ na njedebe nke ụbọchị, ma ọ bụ hapụ ya ka ọ mepee n'abalị. Ọ bụrụ na ha ahọrọ nke abụọ, mgbe ahụ, a ga-etinye ụgwọ ego n'otu abalị.
Day Trading na leverage
Dika ndi ahia ubochi na-eleba anya oke obere obere ego, ị na-achọkarị nnukwu bankroll iji mee ka usoro ahụ baa uru. Yabụ, na-eme 2% kwa ụbọchị na a itule nke $ 200 ga-net gị naanị $ 4 kwa ụbọchị. N'ihi ya, ụfọdụ ụbọchị ahịa ga-ahu nagide leverage.
Maka ndị na-amaghị, leverage na-enye gị ohere iji azụmaahịa karịa ego karịa na akaụntụ gị. Nnabata ego n'aka onye na-ere ahịa, wee bulie uru ahịa gị. E gosipụtara leverage dị ka otutu - dịka ọmụmaatụ, 2x, 3x, 4x, were gabazie.
Nke a bụ ihe atụ nke otu ọrụ ịzụ ahịa si arụ ọrụ:
Wantchọrọ itinye iwu ịzụta na mmanụ na $ 29 kwa gbọmgbọm
Only nwere naanị $ 500 na ụbọchị ahia gị, zụta ịchọrọ ịzụ ahịa na ndị ọzọ
Ka o siri dị, ị na-etinye mpempe akwụkwọ nke 10x
Nke a pụtara na iwu ịzụta gị bara uru ugbu a $ 5,000, n'agbanyeghị na ị nwere $ 500 na akaụntụ gị
Mgbe emechara ụbọchị, mmanụ na-abawanye site na 3%
Nke a sụgharịrị uru nke $ 150
Dịka ihe atụ dị n'elu, ị gaara eme 3% na nkwụnye ego $ 500 gị - nke ruru naanị $ 15. Agbanyeghị, ka itinye ntinye 10x n'ọrụ, nke a mebara site na 10, na-ewere uru gị niile na $ 150.
Agbanyeghị, azụmaahịa a na-akwụ ụgwọ nwere ike ịga n'ihu gị, nke pụtara na nke gị losses na-adịkwu.
Nsogbu mwepu ego
Iji ghọta ihe ize ndụ nke leverage mgbe ahia ụbọchị, anyị kwesịrị ibu ụzọ kọwaa ngwa ngwa etu akụkụ akuku si arụ ọrụ. N'ịnọgide n'otu ihe atụ ahụ dị n'elu, anyị nwere ike ịzụ ahịa na $ 5,000 mgbe ị na-etinye ihe ngosi nke 10x, ọ bụ ezie na anyị nwere $ 500 na akaụntụ anyị.
Ozugbo ahia enịm, na $ 500 na-ewepụ akaụntụ gị itule, na enịm gị oke akaụntụ. N'okwu Layman, oke dị ka nkwụnye ego anaghị akwụghachi ma ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ megidere gị site na ọnụọgụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na ọ gafee, ahia gị ga - adị 'mmiri mmiri' - nke pụtara na ị ga-ejedebe oke akụkụ gị.
Ego ole ka ahia anyi kwesiri igbadata ka anyi wee ghara inwe oke? Ọfọn, nke a dabere na ego ole ị na-etinye n'ọrụ. N'ihe banyere itinye ego na 10x, ị ga-atụfu oke gị ma ọ bụrụ na ahịa ga-emegide gị site na 10%. Nke a bụ n'ihi na na 10x, achọrọ naanị ka ị tinye 10% n'akụkụ.
N'ihe atụ ọzọ, ka anyị kwuo na ị tinyere mpempe akwụkwọ nke 5x. Nke a ga-ekwe ka a $ 2,500 ahia na a $ 500 itule, nke pụtara na oke na-anọchi na 20%. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ahịa ga-emegide anyị site na 20%, anyị ga-atụfu oke $ 500 anyị.
Ego Day Trading na isslọrụ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ụbọchị, ị ga-eji onye na-ere ahịa n'ịntanetị. Dika ndi oru ahia na ere ahia, i gha a gha ego ugwo mgbe i na ahia ahia.
Nke a na-abịa na isi ihe abụọ - ndị mgbasa na ọrụ azụmahịa.
Na ụdị ya kachasị mkpa, mgbasa bụ ọdịiche dị n'etiti 'ịzụta' na 'ire' ego nke ihe onwunwe. Ọ bụ n'ezie sandwiched ma akụkụ nke ezigbo ahịa price, na ọ bụ ihe na-emesi obi ike na agbanwe ga-eme ka ego.
Ihe dị iche n'etiti mgbasa ahụ gosipụtara na 'pips'mgbe ahia ahia ụbọchị, na' isi 'mgbe mgbasa ịkụ nzọ. Na nke ahụ kwuru, ọ dị mfe iji nyochaa mgbasawanye na pasent okwu, ebe nke a na-eme ka anyị mata ole anyị chọrọ itinye ego anyị iji nwekwuo site na imebi
Ọnụ 'zụta' na ngwaahịa Disney bụ $ 106.00
Ọnụ 'ere' na ngwaahịa Disney bụ $ 106.50
Onu ogugu di iche n'etiti ahia abuo bu 0.47%
Ọ bụrụ na anyị azụta ngwaahịa Disney, anyị ga-akwụ $ 106.50, mana anyị nwere ike ree ya naanị $ 106.00
Dị ka ndị dị otú a, anyị chọrọ ọnụahịa nke Disney ka ọ mụbaa site na 0.47% naanị iji mebie
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-agụ ihe ndị ọzọ dị ka uru
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, anyị na-enwe nsogbu mgbe ahịa ụbọchị, ka mgbasa ahụ na-eme ka o doo anya na anyị kwesịrị inweta obere uru naanị iji banye ebe nkwụsị. N'ụzọ dị oke mkpa, nke a bụ ihe kpatara ị ga - eji họrọ ọnụọgụ azụmaahịa n'ịntanetị nke na-enye agbasa agbasa. E kwuwerị, ka mgbasawanye ahụ na-agbasawanye, otú ahụ ka ị ga-achọkwu iji kpuchie ụgwọ mbụ gị!
N'elu mgbasa, ị ike mkpa ịkwụ ụgwọ tradinglọrụ azụmahịa, kwa. Anyị na-ekwu 'nwere ike', dịka ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị akwụ ụgwọ ọrụ azụmaahịa ọ bụla, nke pụtara na ọ bụ naanị mgbasa ka ịchọrọ ile anya.
Ọ bụrụ na a na-ebo ebubo ọrụ azụmaahịa n'ụbọchị gị, mgbe ahụ nke a ga-adabere na nha iwu gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-ere ahia na-akwụ ụgwọ 0.5%, ma ị na-etinye usoro ịzụta maka ọnụ ahịa $ 700 - mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ nke $ 3.50.
Ikwesiri ịkwụ ụgwọ ọrụ ahụ ọzọ mgbe ị na-aga ire ere - na ọnụahịa ahịa ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na iwu gị ruru $ 800 ugbu a, mgbe ahụ ọrụ gị 0.5% ga-abụ $ 4.
Ngwurugwu kacha mma iji ruo ụbọchị ahia na 2021
Yabụ ugbu a ịmaralarị ụzọ na azụmaahịa nke etu azụmaahịa ụbọchị si arụ ọrụ, ugbu a ị kwesịrị ịmalite bido chewe echiche maka ikpo okwu ị chọrọ iji. Enwere ọtụtụ narị usoro ntanetị azụmaahịa na-arụ ọrụ na ntanetị. Nọmba ahọpụtara dị oke, ụfọdụ dịkwa mma, na ọtụtụ dị n'okpuru okpu.
N'iburu nke ahụ n'uche, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nyiwe anyị nwere akara ise dị elu taa na azụmaahịa taa na 2021. Rịba ama, usoro ntanetị ọ bụla edepụtara n'okpuru ebe a na-achịkwa nke ọma, na-anabata ọtụtụ puku ngwa tradable, ma nabata ikpo nke ụzọ ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị.
1. eToro - Bestlọ ahia ahia kachasị mma maka ndị mbido
Ọ bụrụ na ị na-achọ iji nweta ọrụ azụmaahịa gị n'ụkwụ aka nri, ọ nwere ike ịba uru iji usoro eToro enyi na enyi ọhụụ. FCA, CySEC, na ASIC na-achịkwa onye na-ere ahịa na ya - ị nwere ike ịzụta ma ree ọtụtụ puku akụrụngwa ego. Obere nkwụnye ego na-amalite na $ 200, ụzọ nkwụnye ego gụnyere debit / kaadị akwụmụgwọ, Paypal, na waya bank.
Na-akwado ụdị debit / kaadị akwụmụgwọ niile
Enweghị ụgwọ ahia ọzọ karịa mgbasa
Ndebanye aha ngwa ngwa na usoro KYC
A na-edekọ akaụntụ na USD naanị
75% nke ndị na-ere ahịa mkpọsa na-efufu ego mgbe ha na-azụ ndị CFD na onye na-eweta ọrụ a
2. EightCap - Azụmahịa karịrị 200 + Assets Commission-Free
EightCap bụ onye na-ere ahịa azụmaahịa n'ịntanetị nke kwekọrọ na MT4. Nwere ike ịzụ ahịa karịa ngwa ego 200 na ikpo okwu a ma ama ma enwere akaụntụ akaụntụ abụọ ịhọrọ.
Otu akaụntụ kwere ka ọrụ na-enweghị ọrụ na mgbasa ozi na-agbasa site na 1 pip. Ma ọ bụ, ịnwere ike ịzụ ahịa site na 0 pips na ọrụ dị larịị nke $ 3.50 kwa slide. N'ihe banyere ahia, EightCap na-ekpuchi ihe niile site na Forex na mbak na ndenye na ngwaahịa.
Ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịmalite na onye na-ere ahịa a naanị $ 100, mana ị nwere ike ịzụ ahịa n'efu site na ngwa akaụntụ ngosi. Nke kachasị mkpa, a na-achịkwa onye na-ere ahịa a site na otu ASIC ..
ASIC na-achịkwa ahịa
Azụmaahịa karịrị 200 + akụ na-enweghị ọrụ
Nnukwu mgbasa ozi
Enweghị ahia cryptocurrency
Gaa na asatọ
Isi obodo gị nọ n'ihe egwu ọnwụ mgbe ị na-ere CFDs n'elu ikpo okwu a
3. Capital.com - Zlọ Ọrụ Zero na Ultra-Low Spreads
Capital.com bụ onye na-ere ahịa ịntanetị na-achịkwa FCA nke na-enye ọtụtụ ngwongwo ego. All n'ụdị CFDs - nke a na-ekpuchi ebuka, indices, ngwaahịa, na ọbụna cryptocurrencies. Gaghị akwụ otu penny na ọrụ, ma mgbasa na-esi ike. A na-enyekwa ụlọ ọrụ ịgbazinye ego - ya na akara ESMA zuru oke.
Ọzọkwa, nke a guzo na 1: 30 na majors na 1: 20 na ụmụntakịrị na exotics. Ọ bụrụ na ị dabere na mpụga Europe ma ọ bụ na-ewere gị dị ka onye ahịa ọkachamara, ị ga-enweta oke oke. Inweta ego na Capital.com bụkwa ikuku - dịka ikpo okwu na-akwado kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, e-wallets, na ịnyefe akaụntụ ego. Nke kachasị, ị nwere ike bido naanị 20 £ / $.
Kọmitii efu na akụ niile
Anaghị enye ndị na-ekere òkè na ọdịnala
Gaa Leta Capital.com
82.61% nke ndị na-ere ahịa mkpọsa na-efufu ego mgbe ha na-azụ ndị CFD na onye na-eweta ọrụ a
4. AVATrade - 2 x $ 200 Forex Welcome Bonuses
Ndị otu na AVATrade na-enye ugbu a nnukwu ego 20% nke ego ruru $ 10,000. Nke a pụtara na ị ga-achọ itinye $ 50,000 iji nweta ego kachasị ego. Rịba ama, ịkwesịrị ịkwụnye opekempe nke $ 100 iji nweta ego ahụ, ọ dịkwa mkpa ka enyochae akaụntụ gị tupu akwụ ụgwọ ego ahụ. N'ihe banyere ịdọrọ ego ahụ, ị ​​ga-enweta $ 1 maka ọtụtụ nza 0.1 ị na-azụ.
20% nabata ego nke ihe ruru $ 10,000
Obere nkwụnye ego $ 100
Nyochaa akaụntụ gị tupu daashi na-otoro
5. EuropeFX - Nnukwu ego na ọtụtụ FX Trading Platform
Dị ka aha ahụ na-egosi, EuropeFX bụ ọkachamara na-ere ahịa Forex. Site na nke ahụ, ikpo okwu na-akwado CFDs n'ụdị mbak, ndeksi, cryptocurrencies, na ngwaahịa. Ga-enwe ike ịzụ ahịa site na MT4, yabụ ị nwere ike ịhọrọ site na ngwanrọ desktọọpụ, ma ọ bụ ngwa mkpanaka / mbadamba. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa site na ọkọlọtọ ihe nchọgharị weebụ gị, onye na-ere ahịa na-enyekwa ntọala nke ya - EuroTrader 2.0. N'ihe banyere ụgwọ, EuropeFX na-enye mgbasa dị oke nkpa na ụzọ abụọ. Ego gị dị mma n'oge niile, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na enyere onye na-ere ahịa ikike ma nye ya ikikere site n'aka CySEC.
MT4 na nwa ahia ahia
Aha ukwu na ikikere nke CySEC
Akaụntụ adịchaghị nwere nkwụnye ego kacha nta nke 1,000 EUR
Na nchịkọta, ịzụ ahịa ụbọchị bụ mmega ahụ bara uru maka ụfọdụ, mana ọ bụghị ọtụtụ. Site na nke a, anyị na-ekwu na ọtụtụ ndị ahịa ọhụụ ọhụụ tufuru ego na nnwale mbụ, ebe ha anaghị ebu ngwa ọrụ achọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma na mbara igwe.
Na nke ahụ kwuru, anyị nwere olile anya na onye na-azụ ahịa ụbọchị ikpeazụ anyị ekpochapụla gị. Anyị ekpuchiwo ihe niile enwere ịma maka ụlọ ọrụ ahụ - na-achọpụta na enweghị okwute ọ bụla ga-ahapụ. Dị ka ndị dị otú a, ị nwetala ohere kachasị mma iji nweta ọrụ azụmaahịa gị n'ụkwụ aka nri.
Na mmechi, anyị edepụtakwara saịtị azụmaahịa ụbọchị ise anyị kacha elu nke afọ 2021. A na-ahazi ndụmọdụ niile anyị ga-enyocha tupu oge a, nye anyị ọtụtụ ngwa ahịa, ma nye gị ohere itinye ego na debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Ogologo oge ole ka ndị ahịa ụbọchị na-emeghe?
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị ahịa ụbọchị na-emeghe oghere ruo ọtụtụ awa. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ na-ere ahịa, ha nwere ike ịmeghe oghere maka nkeji oge!
Ego ole ka ndị ahịa ụbọchị na-eme?
Enweghị azịza ọ bụla dabara adaba na nke a, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ mgbanwe iji chebara ya echiche. Iji maa atụ, uru onye ahịa ga - ekpebi uru ọ ga - erite, ikike ya, na mmeri ya.
Kedu ihe 'mgbasa' mgbe ahia ụbọchị?
Mgbasa bụ ihe dị iche n'etiti nzụta na ire ere nke ihe onwunwe. Na pasent okwu, ịkwesịrị ịme ma ọ dịkarịa ala gbasaa naanị iji mebie.
Ndi ahia ahia ubochi?
Ee, ma ị na-azụ ma na-ere CFDs, ma ọ bụ na-etinye aka na mgbasa ozi ịkụ nzọ - ụbọchị ahia ga-achịkwa. Ndị na-ere ahịa niile anyị kwadoro na ibe a nwere ikike site na ahụ dị ka FCA (UK), CySEC (Cyprus), na ASIC (Australia).
Ego ole ka m nwere ike ịzụ ahịa?
A na-ekpebi ịgbazinye ego na isi ihe atọ; ọnọdụ gị, akụnụba a kapịrị ọnụ, na ihe onye na-ere ahịa na njikere inye. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’isi obodo UK ma ọ bụ European Union, a na-etinye ego mbido na 30x na nnukwu ego abụọ, yana 20x na ụmụ ntakịrị na ndị nnupụisi. Na ala nke ọnụ ọgụgụ ahụ bụ cryptocurrencies, ebe njedebe bụ naanị 2x.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ m nwere ike iji azụ ahịa taa?
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-enye gị ohere itinye ego na debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ, yana akaụntụ akụ. Platformsfọdụ nyiwe na-enyekwa nkwado na e-wallets dị ka Paypal.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m mepee oghere n’abalị mgbe ahia ụbọchị?
A ga-ebo gị ebubo ego ị ga-akwụ ụgwọ n'otu abalị. Nke a bụ nnoo 'mmasị' na leveraged ego na ị biiri si ore ahia. Nke a bụ ihe kpatara itinye ego ji dabara adaba maka azụmaahịa dị mkpụmkpụ, ebe ọ bụ na ụgwọ ego ga-amalite ịgbakwunye.
Onye edemede: Samantha Forlow
Banyere chepụtara: Samantha Forlow
Emelitere ikpeazụ: January 21, 2021
Samantha bụ onye nyocha na onye edemede nke UK na-ahụ maka ego niile. Nke a kpuchitere ihe niile site na ọdịnala ọdịnala na itinye ego na ntinye ego, na azụmaahịa na CFD. Samantha na-ede ederede ihe gbasara ego ruo ọtụtụ afọ ma nwee akwụkwọ dịgasị iche iche na ngalaba ịntanetị. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ na-enwe ike ịkọwa isiokwu gbasara ego dị n'ụzọ ọhụụ-enyi na enyi.
Nkwụnye ego $ 100 iji nweta ihe nrịba ama VIP n'efu maka 1 Afọ!
Nweta VIP SignalsNkwụnye ego $ 100 iji nweta ihe nrịba ama VIP n'efu maka 1 Afọ! Ahịa na MT4 na ntinye ego ruo 1: 500!